प्रयोगकर्ता वार्ता:202.70.64.15 - विकिपिडिया
मिस्नोमर साथीहरू, मैंले झन्डै २ महिनादेखि आफ्नो नामबाट लेख लेख्न पाइरहेको छैन। त्यसकारण खास लेखहरू पेस गर्न पाएको छैन। यतिसम्म कि आफ्ना लेखहरूमा सन्दर्भ सामग्रीको विवरण समेत थप्न सकेको छैन। जब म लग इन गरेर लेख पेजमा जान्छु, त्यहाँ साधारणतया लेख लेखिने विन्डो देखा नपरेर इन्डेक्स नामको कुनै फाइल खोल्ने हो? भनेर सोध्छ। हरेक पटक त्यसो भएपछि म दिक्क भएको छु। मलाई कसैले बताइदिनुहोस् कि म अब कसरी लेखहरू लेखुँ? यस सन्दर्भमा के म तपाँइ साथीहरूबाट सहयोग पाउन सक्छु? अनि लेखहरू बर्गीकरण गर्ने तथा तिनीहरूको ढाँचा अर्थात फर्म्याट मिलाउने, तस्वीर राख्ने, सन्दर्भ ग्रन्थहरू उल्लेख गर्ने आदिका लागि कसरी गर्ने? कृपया मलाइ सहयोग गर्नुहोस्। त्यसो गरे कसो होला?
तपाईंले लेखेर राम्रो गर्नु भयो। तर Wikipedia मा जानकारी मुलक लेखको धेरै खाचों छ। लेख्दै गर्नुहोला। धन्यबाद।
साथी तपाइ कुन ब्राउजर प्रयोग गर्नुहुन्छ ? तपाइको युजरनेम के हो ? तपाइको आइ पी त ब्लक्ड छैन तर हुन युजरनेम ब्लक्ड हुन पनि सक्छ । फेरी तपाइ mpp.org.np बाट मङ्गल फन्ट डाउनलोड गरेर फन्ट हाली हेर्नुहोस् । नयाँ युजरनेमले प्रयास गर्नुहोस् । त्यसपूछि पनि भएन भने म हेर्नेछु । धन्यवाद। राजेश ११:३९, २२ मे २००७ (UTC)
धन्यवाद साथी, आजकल म सामान्यतया ओपेरा वेव ब्राउजर प्रयोग गर्छु यद्यपि पहिलेदेखि प्रयोग गरेको इन्टरनेट एक्सप्लोरर पनि चलाउन छाडेको छूइन। कहिलेकाँही कुनैकुनै वेवले ओपे‌रा सपोर्ट नगर्दा आई.ई. नै प्रुयोग गर्छु। अहिलेको मेरो समस्या ब्राउजरको समस्या हो जस्तो लाग्दैन। यसै कम्प्युटरमा (IBM Branded P4 PC RAM-256) पहिले राम्रोसित भएको हो। मैंले पोष्ट गरेका सबै लेखहरू यसैबाट बनाएका हुन्। तर अहिले चाहिँ जब म लग इन गरेर लेख लेख्‍ने पेजमा प्रवेश गर्न खोज्छु तब खाली सेतो पृष्टभूमिमा तल उल्लेखित सन्देश देखापर्छ। Process] Type=Edit text Engine=MediaWiki Script=http://ne.wikipedia.org/w/index.php Server=http://ne.wikipedia.org Path=/w Special namespace=Special
[File] Extension=wiki URL=http://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%B7&action=edit&internaledit=true इन्टरनेट एक्सप्लोररमा गर्नखोज्दा Index.php भन्ने फाइल डाउनलोड गर्नु भन्ने सन्देश सित डाउनलोड विकल्प देखापर्छ। तर त्यो फाइल डाउनलोड भएपछि खुल्दैन र काम पनि हुँदैन। मैंले अरू पी.सी. मा पनि प्रयास गरें तर त्यहाँ पनि त्यस्तै सन्देश देखा पर्‍यो। त्यसैले म लग इन अब भन्नुस् म के गरौं?
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=प्रयोगकर्ता_वार्ता:202.70.64.15&oldid=12607" बाट अनुप्रेषित
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक १२:२८, २३ मे २००७ मा परिवर्तन गरिएको थियो।